Mbappe Oo Runta Sheegay: "Real Waxay Natusisay Farqiga U Dhaxeeya Xidigaha Fiican & CL" %
Paris Saint-Germain waxay awooday inay dib ugu soo noqoto wada guulaha maalintii Sabtida, taasoo u ogolaatay Kylian Mbappe inuu helo fursado, taasoo uu kaga hadlo kasoo kasoo reebitaanka Real Madrid, ee kooxdiisa tartanka UCL.
Inkastoo uu daafacay muuqaal ciyaareedka iyo diyaargarowga kooxdiisa ee kulankii wareega 16-ka, kaasoo wadar ahaan 5-2 looga soo takhalusay ayaa wuxuu Mbappe, qiray inuu jiro farqi weyn oo Los Blancos iyo PSG udhaxeeya.
“Maskax ahaan, waxaan doonayey inaan wajahno kulanka aan ka hortegno Madrid sida ugu wanaagsan,” ayuu ku sheegay wiilkaan habeenkii Sabtida.
“Qofna ma dhihi karo waxba ma aanan isku deyin, laakiin tani waa Banooni, inkastoo aan haysano ciyaaryahano fiican, Madrid waxay natusisay farqiga udhaxeeya ciyaartoyda fiican iyo kooxda daafacaneysa tartanka.
“Marka, hadii ay tani nagu dhacday waa inaan mar kale aan soo qabsanaa Baska, waxaana isku deyi doonaa inaan guuleysano kulamada kale, ee aan ka dheeleyno tartamada kale,” ayuu hadalkiisa sii daba dhigay.
Wuxuu kusoo gaba gabeeyay: “Waa run inaan geli karno xaalad adag, laakiin waxaa jira inaan nahay ciyaaryahano caalami ah, waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan aan uga jawaabi doonaa wax walba.